Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.2 Always-on
Voalohany, ny fanangonana tahirin-kevitra dia ahafahan'ny mpikaroka manadihady hetsika tsy ampoizina amin'ny fomba izay tsy ho tanteraka. Ohatra, ireo mpikaroka liana amin'ny fianarana ny fihetsiketsehana Occupy Gezi any Torkia tamin'ny fahavaratry ny taona 2013 dia mifantoka matetika amin'ny fihetsiky ny mpanao fihetsiketsehana nandritra ny hetsika. Ceren Budak sy Duncan Watts (2015) dia afaka nampiasa bebe kokoa ny toetran'ny Twitter mba hianatra ireo mpanao fihetsiketsehana nampiasa Twitter teo aloha, nandritra, ary taorian'ilay hetsika. Ary, izy ireo dia afaka namorona vondrona fampitahàna tsy mpandray anjara teo aloha, nandritra, ary taorian'ny lanonana (sary 2.2). Amin'ny ankapobeny, ny tontalin'ny hafatra nalefan'izy ireo dia nahitàna ireo bitsiky olona 30.000 tao anatin'ny roa taona. Amin'ny fampitomboana ny angona ampiasaina matetika amin'ny hetsi-panoherana miaraka amin'ity fampahalalana hafa ity, i Budak sy Watts dia afaka nianatra bebe kokoa: azon'izy ireo ny manombatombana hoe inona ireo karazan'olona maro no mety handray anjara amin'ny fihetsiketsehana Gezi ary hanombanana ny fiovan'ny toetran'ny mpandray anjara sy tsy mandray anjara, na amin'ny fotoana fohy (mampitaha ny Gezi eo amin'ny Gezi mandritra ny fotoana maharitra) ary amin'ny fotoana maharitra (mampitaha ny Gezi mitoraka lahatsoratra amin'ny Gezi).
Sary 2.2: Famoronana ampiasain'i Budak and Watts (2015) mba hianatra momba ny hetsi-panoherana Occupy Gezi any Torkia amin'ny lohataona 2013. Amin'ny fampiasana ny endriky ny Twitter mandrakariva, nanamboatra ny antsoin'izy ireo ny tolotra efa- bao taloha Olona 30.000 mahery tao anatin'ny roa taona. Raha ampitahaina amin'ny fandalinana manokana izay mifantoka amin'ireo mpandray anjara nandritra ny hetsi-panoherana, ny tolotra avoakan'ny tale dia manampy ny 1) data avy amin'ireo mpandray anjara mialoha sy aorian'ny hetsika ary 2) tahiry avy amin'ny tsy mpandray anjara mialohan'ny fotoana, mandritra ary aorian'ny hetsika. Ity rafitra fananganana tahiry ity dia nahafahan'i Budak sy Watts nanombantombana izay mety ho karazan'olona mety hiditra amin'ny fihetsiketsehana Gezi sy hanombanana ny fiovan'ny toe-tsain'ireo mpandray anjara sy tsy mpandray anjara, na amin'ny fotoana fohy (mampitaha ny Gezi miaraka amin'ny Gezi ) ary mandritra ny fotoana lava (mampitaha ny Gezi eo am-pelatanana).
Ny fisalasalana dia mety manipika fa ny sasany amin'ireto tomban'ezaka ireto dia mety ho natao tsy misy-momba ny loharanom-pifangaroana data (ohatra ny fanombanana maharitra ny fiovan'ny toetr'andro), ary marina izany, na dia mety ho toy izany aza ny fanangonana tahiry ho an'ny olona 30.000 lafo. Na dia nomena tetibola tsy voafetra aza anefa aho, dia tsy afaka mieritreritra fomba hafa izay ahafahan'ny mpikaroka miverina miverina amin'ny fotoana sy mivantana mivantana ny fihetsiky ny mpandray anjara tamin'ny lasa. Ny safidy akaiky indrindra dia ny fanangonana ny tatitra momba ny fitondrantena miverimberina, saingy ireo tatitra ireo dia mety ho fahaleovan-tena voafetra sy araka ny tokony ho izy. Ny tabilary 2.1 dia manome ohatra hafa momba ny fanadihadiana izay mampiasa loharanom-baovao hatrany mba hianarana hetsika tsy ampoizina.
Tabilao 2.1: Fandalinana hetsika tsy ampoizina amin'ny fampiasana loharano lehibe foana.
Fihetsik'i Gezi ao Torkia Twitter Budak and Watts (2015)
Hetsika hetsi-panoherana ao Hong Kong Weibo Zhang (2016)
Fandringanana ny polisy ao New York City Tatitra Stop-and-frisk Legewie (2016)
Olona miara-miasa amin'ny ISIS Twitter Magdy, Darwish, and Weber (2016)
11 Septambra 2001 livejournal.com Cohn, Mehl, and Pennebaker (2004)
11 Septambra 2001 pager messages Back, Küfner, and Egloff (2010) , Pury (2011) , Back, Küfner, and Egloff (2011)
Ankoatra ny fandalinana hetsika tsy ampoizina, ny rafitra finday dia ahafahan'ny mpikaroka manamboatra tombana amin'ny fotoana mety, izay mety ho zava-dehibe amin'ny toe-javatra izay ahafahan'ny mpanao politika manangana-eo amin'ny governemanta na ny indostria mandray andraikitra amin'ny fijerena ny toe-javatra. Ohatra, ny angona sosialy sosialy dia azo ampiasaina mba hitantanana ny valim-panafahan'ny loza voajanahary amin'ny loza voajanahary (Castillo 2016) ary ny loharano maro samihafa azo ampiasaina dia azo ampiasaina hamolavolana teti-bola momba ny asa ara-toekarena (Choi and Varian 2012) .
Amin'ny famaranana, ny rafitra momba ny angon-drakitra dia ahafahan'ny mpikaroka manadihady hetsika tsy ampoizina ary manome fampahalalana vaovao amin'ny mpanao politika. Tsy mieritreritra anefa aho fa ny rafitra momba ny angona mandrakariva dia tsara ho an'ny fanaraha-maso ny fanovana mandritra ny fotoana lava be. Izany no satria maro ny angon-drakitra rafitra lehibe ireo-miova foana ny dingana izay voatarika hiantso aho taty aoriana ao amin'ny toko (fizarana 2.3.7).